Amamitha Amandla Amafektri Amandla - China Amamitha Amandla Amakhiqizi Abakhiqizi, abahlinzeki
KF900A ephathekayo Intelligent ...
K2063i Universal edluliselwe Test ...
Imitha Yesigaba Samanethiwekhi Amandla Amathathu IP52 / 0.05Hz PMC180NS
Uhlelo lwe-AC olulodwa / lwesithathu
Amandla kagesi angama-220
Ukuhlaziywa Kwekhwalithi Yamandla
PMC96 uchungechunge lwesigaba sesithathu imitha yokuqapha kagesi
I-PMC96 uchungechunge lwesigaba sesithathu imitha yokuqapha kagesi isebenzisa Ingxenye yohlobo lwe-LCD screen, enhle futhi enhle, ukuphakama okuphezulu; Ngeprosesa eshesha kakhulu njengomgogodla, ukukalwa kwemingcele kagesi kusetshenziswa i-22 AD, amandla kagesi kagesi, ububanzi obunamandla obuningi, ukunemba okuphezulu. Can ozikhethela ukumisa ehlukahlukene kanambambili 、 edluliselwe 、 RS-485 zokuxhumana module, kalula ukufeza ukuhlanganiswa ahlukahlukene ukusatshalaliswa kohlelo ezihlakaniphile.
I-PMC72 Series Imitha Yesithathu Yokuqapha Ugesi
I-PMC72 uchungechunge lwesigaba sesithathu imitha yokuqapha kagesi isebenzisa Ingxenye yohlobo lwe-LCD screen, enhle futhi enhle, ukuphakama okuphezulu; Ngeprosesa eshesha kakhulu njengomgogodla, ukukalwa kwemingcele kagesi kusetshenziswa i-22 AD, amandla kagesi kagesi, ububanzi obunamandla obuningi, ukunemba okuphezulu. Can ozikhethela ukumisa ehlukahlukene kanambambili 、 edluliselwe 、 RS-485 zokuxhumana module, kalula ukufeza ukuhlanganiswa ahlukahlukene ukusatshalaliswa kohlelo ezihlakaniphile.
I-EngyBrick Distributed Intelligent Power Monitoring Module
I-EngyBrick System imayelana nesixazululo samamojula wokusabalalisa amandla we-smart, azinikele ekusizeni amaklayenti ukuthi athuthukise ukusebenza kwawo kahle futhi anciphise kakhulu isabelomali sokuthengwa kwempahla kanye nezindleko zokufaka, enikeza abasebenzisi imodi yokufaka elula kakhulu nemodi yokuthunyelwa yokonga isikhathi enhle kakhulu. Uhlelo luqukethe ukutholwa kwesiginali yokuxhumana nokuqapha amandla kagesi, ukuqapha kwamanje izingxenye ezimbili. Uhlelo luthatha imodi yokuphakelwa kwamandla kagesi ezimele, imbobo ye-RJ45 exhuma ngamamojula wengxenye ngayinye. Ukuthunyelwa kwayo kwamukela imodi yokhiye owodwa yokulungisa ikheli emkhakheni. futhi ingakwazi ukulungisa imingcele nemodi yokusebenza yemodyuli ngesikrini sokubonisa.
Imitha yamandla kagesi ye-PMC200S
I-PMC200 Power Parameter Tester isetshenziselwa kakhulu uhlelo lokuphathwa kwamandla, i-substation automation, ukusatshalaliswa kwenethiwekhi ezishintshayo, ukusatshalaliswa kwamandla kagesi, imishini yezimboni, isakhiwo esihlakaniphile, i-switchboard ehlakaniphile, ukushintsha ikhabethe, njll. Ihlanganisa ukufakwa kwamakhompiyutha, ukufundisisa nokuxhumana ndawonye, ​​ukufaka esikhundleni imishini yendabuko efana ne-transducer yobuningi kagesi, insimbi yokubonisa enezinombolo, iyunithi yokutholwa kwedatha kanye nesihlaziyi sokuqopha, njll. Izinhloso eziningi zehlisa izindleko, futhi ukuxhumana okulula kocingo kwenza ukuhlolwa kube lula.
Ibanga Ukuvikelwa edluliselwe Tester, Ukwahluka Ukudluliswa Tester, Intelligent edluliselwe Tester, Edluliselwe Test, Isihloli sokudluliswa kokuvikelwa, Digital edluliselwe Test, Yonke Imikhiqizo